Ukufota izakhiwo usebenzisa i-Digital SLR yakho
Izakhiwo, nokuba ziimpawu zomhlaba, iicawa, imimangaliso yoyilo, okanye umdla kuwe-zizifundo ezilungileyo kuwe nakwi-SLR yakho yedijithali. Izakhiwo musa ukulibala ukuncuma, musa ukujijeka, kwaye zihlala zilungile. Umceli mngeni wakho inokuba kukufumana indawo yokujonga okanye ukudala ubume obuzisa umbono omtsha kulwakhiwo olufotwa rhoqo.
UWilliam Danforth Chapel eyilelwe nguFrank Lloyd Wright.
Ukukhetha useto lwekhamera kwiifoto zezakhiwo
Ngokubanzi, ukufotwa kwezakhiwo kufuna useto olukumgangatho ofanelekileyo kwi-SLR yakho yedijithali:
Indlela yokubala: Uvavanyo
Indlela yokuqhuba: Udubulo olunye
Indlela yokudubula: Ukuqala ngokubaluleka kubunzulu obukhulu bentsimi
Umngxuma: f / 11 to f / 16, ekunika ubunzulu obufanelekileyo bentsimi; kwipiniki, unokuyeka ukuya ku-f / 9.0 kwaye ufumane iziphumo ezilungileyo ebusuku
Ukuseta i-ISO: 100 ukuya ku-400, kuxhomekeke ekukhanyeni okukhoyo; ukudubula ebusuku, unokufuna useto olungama-800
Indlela yokuGxila: Udubulo olunye
Ubude boJoliso: 28mm kunye ne-100mm; Sebenzisa i-28mm kwisakhiwo esikhulu esivela kufutshane, i-50mm kwizakhiwo ezincinci ezikude, kunye ne-100mm kulwakhiwo olukude okanye ukusondeza iinkcukacha zesakhiwo esikufutshane.
Sondeza ukuze ubambe umba omnye wolwakhiwo.
Indawo ekuJoliswa kuyo ngokuzenzekelayo: Inqaku elinye lokujonga ngokuzenzekelayo
Ukuzinza komfanekiso: Ngokuzithandela; khubaza ukuba usebenzisa i-tripod
Ukuba udubula iinkcukacha zokwakha, ufuna ubunzulu bentsimi, ke sebenzisa indawo enkulu yokuvula / encinci f / yeka - f / 4.0 ukuya ku-f / 5.6- kunye nobude obuphakathi obuyi-50mm ngefowuni yakho okanye iilensi ezinkulu.
Izakhiwo ezidityanisiweyo kunye nezixhobo zentsimbi zenza iifoto ezinomdla.
Ukuthatha imifanekiso yezakhiwo
Izakhiwo zinazo zonke iintlobo zeenkcukacha ezinomdla onokuzisebenzisa ukwenza ifoto etsala ababukeli bakho emfanekisweni. Ukukhanya kubaluleke kakhulu, ke thintela iintsuku eziqaqambileyo, ezinelanga ezivelisa ukukhanya okukhanyayo kunye nezithunzi ezinzima kwiifoto zakho. Endaweni yoko, khetha ukukhanya kwegolide kunye nezithunzi ezithambileyo zentsasa okanye zangokuhlwa; Iintsuku ezisibekele, kunye nokukhanya kwazo okusasazekayo, zilungile nazo.
Sebenzisa inkcukacha esele ikhona ukukhokelela umbukeli wakho kwindawo ephambili yomfanekiso.
Ukuba ufota isakhiwo esikude kunokuba side, tyhila ikhamera kwiidigri ezingama-90 (imo yePortrait) kwaye uthathe umfanekiso.
Ungayihlanganisi imbonakalo yomhlaba ongaphandle kwaye ujolise kumba ofumana umdla. Ungasitshintsha isikhundla sakho ube nembono elungileyo- zama ukuguqa ngamadolo ukuze ubandakanye umphambili emfanekisweni, kwaye wenze isangqa kwisakhiwo esikhangela iindawo ezintsha.
Ukubeka i-steeple kwelinye icala kunye nokusebenzisa ingca emnyama ukuzoba iliso lombukeli ecaweni kukwenziwa kakuhle kweefoto.
Qiniseka ukuba awunazinto zingabonakaliyo - iipali zoncedo, iitoti zenkunkuma, iingcingo zombane, kunye nokunye okunjalo-kumfanekiso wakho, onokuphazamisa umxholo womfanekiso wakho.
Ngamanye amaxesha, usondele kakhulu kwisakhiwo, uthambekisa ikhamera ukuze ufumane yonke into kwisakhelo kwaye uphelele kwifoto apho isakhiwo kujongeka ngathi iyawa. Isisombululo kukubuyela umva de ube ubambe inqanaba lekhamera emhlabeni kwaye usibone sonke isakhiwo kwisibonisi.
I-pepcid ac vs pepcid igqityiwe
ingakanani i-sudafed engayithatha
I-republic yendalo i-aloe vera gel ingredients
Ucoceka njani indawo yediski
Unyango lwe-tylenol overdose ekhaya
taurine ezinye iziyobisi kwiklasi enye